Rouhani oo ku eedeeyey ‘calooshood u shaqeystayaal’
‘Dilku … wuxuu muujinayaa cadowgeenna rajo beel iyo nacaybkooda qoto dheer,’ ayuu yidhi Rouhani [Faylka: AFP]
Hogaamiyaha Iran ayaa ku eedeeyay Israel in ay dishay nin reer Iran ah oo aad ugu xeel dheeraa cilmiga barnaamijka nukliyeerka oo reer galbeedku inbadan ka shakiyeen inuu ka dambeeyay soo saarista qarsoodi ah ee nukliyeer Iran, sida uu wariyay TV-ga Dowladda.
“Mar labaad, gacmaha shart ah ee isla-weynida adduunka waxaa lagu wasakheeyey dhiigga calooshood u shaqaystayaal mucaawimada ah ee Saxyuuniyadda,” Hogaamiye Hassan Rouhani ayaa ku yiri hadal uu soo saaray, sida lagu sheegay warbixinta TV-ga dowladda Sabtidii.
“Dilkii shahiid [Muxsin] Fakhrizadeh wuxuu muujinayaa rajo xumada cadawgeena iyo qoto dheerida nacaybkooda… Shihiidnimadiisa ma gaabineyso guulihii aan gaarnay.” Ayuu ku sheegay qoraalkiisa.
Taliyayaasha militariga Iran ayaa ku hanjabay aargudashada dilkii jimcihii loo gaystay Saynisyahankii Nukliyeerka Fakhrizadeh, oo warbaahinta Iran ay sheegtay in uu ku dhintay isbitaalka ka dib markii raggii soo weeraray ay ku dhex dileen gaarigiisa Ab-Sard, oo ah xaafad ku taal bariga Tehran.
Sawir gacmeed uu diyaariyay TV-ga dowlada Iran ayaa muujinaya qasaaraha ka dhashay weerar lala beegsaday gaari uu lahaa saynisyahan Iran u dhashay oo la yiraahdo Mohsen Fakhrizadeh meel u dhow caasimada Tehran.
Hogaamiyaha sare ee jamhuuriyada Shiicadah ah Ayatollah Ali Khamenei ayaa balan qaaday inuu ka aargudan doono cidii ku lug leheed dilkii Fakhrizadeh wuxuuna sheegay in shaqadiisa nukliyeerka ay sii socon doonto.
Wuxuu ku baaqay in la ciqaabo dambiilayaasha, qoraal uu ku daabacay boggiisa, Khamenei wuxuu ku sheegay in saynisyahanku “u shahiiday dambiilayaal iyo calooshood u shaqeystayaal arxan daran”.
Marka la eego dilka, Khamenei wuxuu sheegay in mas’uuliyiinta Iran ay tahay in ay si dhab ah uga fiirsadaan oo ay dabagal ku sameeyaan laba arrimood.
“Midda hore waa dabagalka dambigan oo si cad loo ciqaabayaa dambiilayaasheeda, iyo tan kale, iyadoo la raacayo dadaalka cilmiyaysan iyo farsamada ee shahiidka dhammaan qeybihii uu ka shaqeynayay,” ayuu yiri.
Fakhrizade oo 63 jir ah wuxuu xubin ka ahaa ilaalada kacaanka Iran wuxuuna khabiir ku ahaa soo saarista gantaalada. Wuxuu madax ka soo noqday ururka hal abuurka difaaca iyo cilmi baarista ee wasaarada difaaca ee Iran.
Raiisel wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu wuxuu si gaar ah ugu xusay Fakhrizadeh magac ahaan bandhigii 2018 ee kusaabsanaa barnaamijka nukliyeerka Iran. “Xusuusnow magacan,” ayuu yiri.
Wasiirka arrimaha dibedda ee Iiraan Javad Zarif ayaa sheegay in ay jiraan cadeymo tilmaamaya ku lug lahaanshaha Israa’iil ee dilka, laakiin ma cadda cidda dhabta ah ee fulisay duqeynta
Safiirka Iran u fadhiya Qaramada Midoobay, Majid Takht Ravanchi, ayaa warqad u qoray xoghayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres iyo golaha amaanka ee qaramada midoobay jimcihii in dhowr saynisyahano sare oo reer Iran ah lagu dilay “weeraradii argagixiso” tobankii sano ee la soo dhaafay, wuxuuna ku yiri ” dalalka shisheeye qaarkood ”ayaa mas’uul ka ahaa.
Wuxuu ugu yeeray “fulaynimo” dilkii Fakhrizadeh isku day lagu “burburinayo” gobolka iyo carqaladeynta horumarka Iran ee dhinacyada sayniska iyo teknolojiyadda.
UN waxa ay ku baaqday ‘xakameyn’
Dhimashada Fakhrizadeh waxa ay kicin kartaa iska hor imaad dhexmara Iiraan iyo kuwa ka soo horjeeda todobaadyadii ugu dambeeyay oo uu ugu horeeyo Mareykanka ee Donald Trump iyadoo ay sii murjineyso dadaal kasta oo Hogaamiyaha la doortay ee Maraykanka Joe Biden uu dib ugu soo nooleynayo diblomaasiyadda Iiraan.
Dhanka kale, Guterres wuxuu ku booriyay is xakameyn sida uu sheegay afhayeenkiisa.
“waxaa na soo gaaray wararka sheegaya in saynisyahan reer Iran ah oo cilmiga nukliyeerka lagu dilay maanta meel u dhow Tehran. Waxaan ku boorineynaa xakameyn iyo baahida loo qabo in laga fogaado ficil kasta oo horseedi kara xiisadaha ka sii kordhaya gobolka, ”ayuu yiri afhayeenka Guterres Farhan Haq.
Assed Baig oo ka tirsan Telefashinka Al Jazeera, ayaa sheegay in saraakiisha Iran ay durbaba wacad ku mareen in ay ka jawaabayaan weerarka iyagoo sheegay in barnaamijkooda nukliyeerka uu sii socon doono.
Israel ayaa heegan galisay safaaradaha ay ku leedahay dunida daafaheeda kadib hanjabaadaha aar-gudashada ah ee Iran hawada u marisay, Israel N12 news ayaa Sabtidii werisay.
Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibedda ee Israa’iil ayaa sheegay in wasaaraddu aysan ka hadlin arrimaha amniga ee la xiriira wakiiladooda ku sugan dibadda.
Sida laga soo xigtay Baig, dhacdadu waxa ay u badan tahay in ay kicin doonto su’aalo ku saabsan “amniga gudaha” ee Iran.
“Iran waligeed uma oggolaan isaga [Fakhrizadeh] in ay baaritaan ku sameeyaan Hay’adda Caalamiga ah ee Atomiga, ‘ayuu yiri Baig. Meesha uu yaallo Maydkiisa ayaa sidoo kale la qariyey. ”
Dhimashada saynisyahanku waxa ay timid iyadoo ay jirto walaac cusub oo ku saabsan xaddiga yuraaniyamka hodanka ah ee Iiraan soo saarayso. Yuraaniyam tayeysan ayaa qayb muhiim ah ka ah soo saarista tamarta nukliyeerka iyo hubka nukliyeerka labadaba.
Horaantii bishan, New York Times ayaa soo warisay in Trump uu ka codsaday kaaliyeyaashiisa dhow waxa “ikhtiyaar ah ee la heli karo” si ay tallaabo uga qaadaan goobta nukliyeerka Iran ee muhiimka ah ee Natanz, taas oo Tehran ay u ballan qaaday “jawaab burburin”.
Bishii Maajo 2018, Trump wuxuu si kaligiis ah uga baxay heshiiskii nukliyeerka Iran ee 2015 ee ay la gashay quwadaha adduunka wuxuuna saaray cunaqabateyn dhaqaale oo adag oo sii kordheysa tan iyo markaas.
Sanadkii la soo dhaafay, maamulka Trump wuxuu isku dayay inuu ku adkeeyo maamulka Biden inuu ku soo laabto heshiiskii nukliyeerka iyada oo loo marayo dib-u-habeynta hay’adaha Iran iyo shakhsiyaadka horeyba loogu yeeray magacyada cusub ee la xiriira argagixisada.
Iiraan waxa ay horey ugu yeertay istiraatiijiyadda maamulka “cadaadiska ugu badan” ee Trump tusaale “argagixiso dhaqaale iyo caafimaad”.
Jamaahiirta Real Madrid Oo Kala Doortay Erling Haaland &
the army bombs Mekele, the capital of Tigray